Kooxda Arsenal oo markii 13aad ku guuleysatay Koobka FA Cup (Sawirro) · Jowhar.com Somali News Leader
Kooxda Arsenal oo markii 13aad ku guuleysatay Koobka FA Cup (Sawirro)
by A M | Saturday, May 27, 2017 | 4511 views
May 27 (Jowhar)— Kooxda Arsenal oo sanadkan gashay kaalinta shanaad ee Horyaalka Ingiriiska ayaa caawa ku guuleysatay Koobka FA CUP, oo ka mid ah koobabka ugu cimriga weyn ee laga ciyaaro adduunka.
Arsenalka ayaa 2-1 kaga adkaatay kooxda ay xafiiltamaan ee ay ka wada dhisan yihiin London, kaddib ciyaar adag oo ka dhacday garoonka Wembley.
Ciyaaryahan Alexis Sanches ayaa daqiiqadii afaraad ee bilowga ciyaarta u dhaliyay, gool loo maleynayay Offside, laakiin calan-hayaha uu tilmaamay inay gool tahay.
Wixii markaas ka dambeeyay Arsenal ayaa hoggaanka ciyaarta qabatay, waxaana ay qeybtii hore heshay fursado ay goolal ku dhalin kartay, waxaana ka mid ahaa kubad madax aheyd oo uu Welbeck birta ku dhiftay, iyo kubad uu Ozil ka dul qaaday goolhayaha, oo uu shabaqa ka soo celiyay daafaca Chelsea Cahil.
Qeybtii hore ayaa ku soo dhamaatay 1-0 oo ay Arsenal ku hoggaamineysay, qeybtii labaad ayaa markii la isku soo laabtay, labada kooxood waxay abuureen fursado, hase yeesheen daqiiqadii 68aad ayaa waxaa Chelsea kaarka cas ama Rooso laga siiyay ciyaaryahan Moses oo qaatay jaalihii labaad.
Chelsea oo 10 ciyaartoy ku ciyaareysay ayaa daqiiqadii 76aad heshay goolkii bar baraha, waxaana u dhaliyay Diego Costa, kaasoo ciyaarta ka dhigay 1-1, isla markaana soo celiyay rajada Chelsea.
Hase yeeshee Arsenal ayaa saddex daqiiqo kaddib dhalisay goolkii labaad, waxaana madax ugu dhaliyay ciyaaryahan Ramsey, oo meesha ka saaray rajadii tababare Conte ee ahaa in koobkii labaad uu u qaado kooxdiisa Chelsea xilli ciyaareedkiisa u horeeyay.
Gaba gabadii ayaa ciyaarta ku soo dhamaatay 2-1 oo ay Arsenal ku badisay, waxayna taas rajo gelisay Tababare Wenger oo loo maleynayo inuu sii joogayo kooxda.
Arsenal ayaa noqotay kooxda ugu koobabka badan, iyadoo qaaday markii 13aad, waxaana Tababare Arsene Wenger oo xilli ciyaareedkan wajahayay caqabado uga imaanayay Taageerasha uu u qaaday kooxda illaa 7 Koobkan.
Agaasimihii Guud ee Wasaaradda Haweenka oo xilka laga qaaday
Warar sheegaya in xilka laga qaadi rabo Xisaabiyaha Guud ee Qaranka